विश्वकै सबैभन्दा गरीब देशहरुमा कर्मचारीहरुको तलब कति ? ~ Banking Khabar
विश्वकै सबैभन्दा गरीब देशहरुमा कर्मचारीहरुको तलब कति ?
बैंकिङ खबर । गरीब, विपन्न वा अविकसित मुलुक भन्ने वित्तीकै अफ्रिकी वा दक्षिण एशियाली मुलुकहरु दिमागमा आउँछन् । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा वा विकासात्मक गतिविधिका आधारमा यी मुलुकहरु अमेरिकी वा युरोपेली मुलुकभन्दा पछाडी छन् । हाल प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मुलुक लाइबेरिया रहेको छ । लाइबेरियाको प्रतिव्यक्ति आय ७१० अमेरिकी डलर मात्रै छ । त्यस्तै, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकको प्रतिव्यक्ति आय ७३० अमेरिकी डलर छ भने बुरुण्डीको प्रतिव्यक्ति आय ७७० अमेरिकी डलर छ । यस्तो आय कंगोमा ८७० अमेरिकी डलर र नाइजरमा ९९० अमेरिकी डलर छ ।
विश्वकै सबैभन्दा गरीब यी देशहरुमा कर्मचारीहरुको तलब कति होला?
अर्को विपन्न मुलुक बुरुण्डीमा कर्मचारीहरुको तलब मासिक न्युनतम एक लाख ६१ हजार बीआईएफ छ भने अधिकतम ५२ लाख ७९ हजार बीआईएफ रहेको छ । ०.०६१ नेपाली रुपैयाँ बराबर एक बुरुण्डीयन फ्रांक (बीआईएफ) हुन्छ ।
कंगोमा मासिक तलब न्युनतम दुई लाख ८२ हजार सीडीएफ देखि अधिकतम ९२ लाख ५७ हजार सीडीएफसम्म रहेको छ । एक कंगोलिज फ्रांक (सीडीएफ) बराबर ०.०६८ नेपाली रुपैयाँहुन्छ ।